बीमा Archives ~ Banking Khabar
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको १८ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
बैंकिङ खबर । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले मिति २०७७ साल आषाढ १३ गते, शनिबार कम्पनीको १८ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । उक्त साधारण सभामा सञ्चालक समितिका तर्फबाट कम्पनीका अध्यक्ष रतन लाल केडियाले कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन तथा वित्तिय विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले सो आ.व. २०७५/७६ मा कम्पनीले विभिन्न बीमा व्यवसाय अन्तर्गत रु. १
ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बीमा योजना सम्बन्धी एनिमेसन भिडियो सार्वजनिक
बैंकिङ खबर । ज्योति लाईफले ग्राहकहरुलाई आफ्ना बीमा योजना सम्बन्धी सरल र विस्तृत जानकारीको लागि नेपाली जीवन बीमा उद्योगमा नै नौलो प्रयोगको रुपमा पहिलो पटक एनिमेसन भिडियो सार्वजनिक गरेको छ । ज्योति सुरक्षित भविष्य जीवन बीमा योजना सम्बन्धी उक्त भिडियोमा यसका विशेषता तथा यस्ले गर्ने रक्षावरण सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी समावेश गरिएको छ । नेपालमै सर्वाधिक
बीमा समितिले असार १ गतेदेखि लकडाउन अवधिको मान्यता नदिने
बैंकिङ खबर । बीमा समितिले असार १ गतेदेखि नेपाल सरकारबाट लकडाउन मोडालिटी परीवर्तन हुने भएकाले भोली अर्थात असार १ गतेबाट लकडाउन अवधि मान्यता नदिने भएको छ । समितिले यसअघि निर्देशन जारी गर्दै लकडाउन अवधिमा सवारी साधन थन्किने भन्दै सो अवधिको बीमा प्रिमियममा बीमितलाई दुई तिहाई छुट दिन निर्देशन दिएको थियो । समितिले मोटर बीमा सम्बन्धि
दाबी भुक्तानीमा क्रियाशिल सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स
बैंकिङ खबर । विश्वव्यापी महामारिको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) संक्रमणको कारण सृजित असामान्य परिस्थितिले सामाजिक ,आर्थिक कृयाकलापलाई दिर्घकालिन असरमा पु-याई रहेको परिप्रेक्ष्यमा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स बीमा दावी भुक्तानी गर्न तर्फ केन्द्रित रहेको छ । यस विषम परिस्थितिमा समेत वीमित आकांक्षा अनुरुपको बीमा सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले तोकेको मापडण्ड अनुरुप सुरक्षात्मक विधि अपनाई
बैंकिङ खबर । कोरोनाको जोखिम न्युनिकरण तथा सुरक्षण गर्न ल्याइएको कोरोना बीमा कार्यक्रम पुनः आजबाटै सुचारु हुने भएको छ । व्यवसायीले थप दायित्व बहन गर्न नसक्ने भन्दै यसलाई स्थगन गर्न लिखित आह्वान बुझाएपछि बीमा समितिले सहमति जनाएको थियो तर यस बीमाको जोखिमको दायित्व सरकार, बीमा समिति, नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी र बीमा कम्पनीहरुले समन्वयन गरी सबैले
बीमा विज्ञ – भोजराज शर्मा / सुरुमा मैले बीमा क्षेत्रमा काम गर्न थाल्दा केही विदेशी कम्पनीहरु मात्र थिए । ती विदेशी बीमा कम्पनीहरुले बीमा व्यवस्थापन राम्रोसँग गरेका थिएनन् । खासगरी उनीहरु एउटा एजेन्सीकै रुपमा थिए । नेपालबाट धेरै पैसाहरु बाहिर जाने गरेको थियो । नेपाल एउटा कलेक्सन सेन्टर जस्तो मात्र थियो । त्यो समयमा एलआईसी
बैंकिङ खबर । कोरोनाको जोखिम न्युनिकरण तथा सुरक्षण गर्न ल्याइएको कोरोना बीमा कार्यक्रम स्थगित भएको छ । व्यवसायीले थप दायित्व बहन गर्न नसक्ने भन्दै यसलाई स्थगन गर्न लिखित आह्वान बुझाएपछि बीमा समितिले सहमति जनाएको हो । समितिको निर्देशन अनुसार आज शुक्रबारदेखि केही समयका लागि कोरोना बीमा स्थगीत भएको छ । विश्वभर कोरोनाका संक्रमितहरु बढिरहेको र त्यसको
बैंकिङ खबर । महालक्ष्मी लाईफमा कार्यरत सम्पुर्ण कर्मचारीहरुको कोरोना बीमा गराइएको छ । कोरोना भाइरस (COVID-19) को विश्वव्यापी संक्रमणबाट नेपाल पनि प्रभावित हुँदै गइरहेको छ। देशभरीको ४० भन्दा बढी जिल्लामा संक्रमण फैलिसकेको वर्तमान अवस्थामा कोरोनाबाट मृत्यू भए पश्चात यो महामारिले हामी सबै आक्रान्त हुदैछौँ । सरकारले तोकेको अत्यावसक सेवामा बीमा सेवा पनि पर्ने र कोरोनाको
प्रभु इन्स्योरेन्समा एक्सिलेन्ट सेक्युरिटि सर्भिसका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको कोरोना बीमा
बैंकिङ खबर । एक्सिलेन्ट सेक्युरिटि सर्भिस प्रा.लि.ले आफ्ना सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको कोरोना भाईरस (कोभिड १९) बिरुद्धको बीमा गराएको छ । सेक्युरिटि सर्भिसले आफ्ना कर्मचारीहरुको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै प्रति कर्मचारी रु. ५०,०००।०० का दरले कोरोना बीमा गराएको हो । प्रभु इन्स्यारेन्स लिमिटेडमा गराएको बीमाबाट सेक्युरिटि सर्भिसमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीको कोरोना भाइरस परीक्षण गर्दा पिसिआर टेस्ट पोजेटिभ
बीमालेख धितो राखी कर्जा लिनेलाई ब्याजमा १५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था
बैंकिङ खबर । बीमा कम्पनीबाट आफ्नो बीमा लेख धितो राखी कर्जा लिने बीमितले लकडाउन अवधिभरका लागि आफूले तिर्नुपर्ने ब्याजमा १५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन्। बीमा समितिले निर्देशन जारी गर्दै बीमा कम्पनीबाट आफ्नो बीमा लेख धितो राखी कर्जा लिने बीमितले लकडाउन अवधिभरका लागि आफूले तिर्नुपर्ने ब्याजमा १५ प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो।
सवारी साधनको बीमा शुल्कमा छुट दिन इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बीमा समितिको निर्देशन
बैंकिङ खबर । बीमा समितिले नन लाइफ बीमा कम्पनीहरुलाई लकडाउन अवधिको सवारीसाधनको बीमा शुल्कमा छुट दिन निर्देशन दिएको छ। समितिले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपाल सरकारले ०७६ चैत ११ देखि लकडाउन घोषणा गरिएको अवस्थामा अधिकांश सवारीसाधन पूर्ण रुपमा थन्किएको तथा केही सवारीसाधन आंशिक र अतिन्यून रुपमा मात्र चलेकोले बीमा जोखिम पनि न्यून हुने
जीवन बीमा कम्पनीले कोरोना बीमा बेच्न नपाइने
बैंकिङ खबर । जीवन बीमा कम्पनीले कोरोना बीमा बिक्री गर्न थालेपछि बीमा समितिको यसमा विशेष ध्यानाकर्षण भएको छ । कोरोनाको बीमा गर्न निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई मात्रै स्वीकृति दिएको समितिले जनाएको छ। यसमा कोरोना बीमालेखसँग जोडी केही जीवन बीमा कम्पनीले समेत निःशुल्क कोरोना बीमा गर्ने विज्ञापन गरेकोमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफामा सुधार, खुद बीमाशुल्कमा उल्लेख्य वृद्धि
बैंकिङ खबर । प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सको तेस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले १५ करोड २२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । गत वर्ष यसले १४ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । यस्तै, कम्पनीको खुद बीमाशुल्कमा वृद्धि भएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा २४ करोड ८४ लाख खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको कम्पनीले
ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सले आफ्ना बीमितहरुलाई कोभिड–१९ को बीमा गरिदिने
बैंकिङ खबर । ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले बैशाख २७, २०७७ देखि जेष्ठ मसान्त, २०७७ भित्र सावधिक जीवन बीमाको नवीकरण बीमा शुल्क तिर्ने बीमितहरुको लागि बीमा समितिले नेपाली नागरिकहरुका लागि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु मार्फत हालै बजारमा ल्याएको कोभिड–१९ को विरुद्ध रु.५० हजार बराबरको जोखिम बहन हुने गरि १ वर्षको लागि बीमा सुविधा दिने भएको छ ।
बैंकिङ खबर । विश्वभर माहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपाल सरकारले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवा बन्द गरेको अवस्थामा उक्त अवधिभरका लागि संक्रमणबाट सजग रही सम्पूर्ण बिमक, अभिकर्ता, सर्भेयर, सर्वसाधारणको जानकारीका लागि बीमा समितिले लकडाउन अवधिभित्र संकलन गनुपर्ने जीवन बिमाको प्रिमियम संकलन गर्ने समय जेठ मसान्तसम्म पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । कोरोना भाइरस बाट